के हात सेनिटाइजरले फ्लूलाई मार्दछ? के हात धुनेले फ्लूलाई मार्छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण खेलहरु कल्याण प्रेस समाचार मनोरञ्जन समुदाय कम्पनी औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण भारी खेल औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> हाते सेनिटाइजर वा हात धुने फ्लू मार्न सक्छ?
हाते सेनिटाइजर वा हात धुने फ्लू मार्न सक्छ?
जब देखि COVID-१ p महामारी शुरू भयो, तपाईंले देख्नुहुने हात सेनिटाइजर जताततै: बैंक, किराना स्टोर चेकआउट लाइनहरू, हुलाक कार्यालय, र सार्वजनिक बाथरूमहरू। हामीलाई बताइएको छ हातहरू धुने यो दोस्रो उत्तम तरिका हो यदि राम्रो ‘ओएल साबुन र पानी उपलब्ध छैन भने। त्यसोभए हात सेनिटाइजर फ्लू भाइरसको लागि एक दुश्मन दुश्मन हो? वा पुरानो शैलीको साबुन र पानी उत्तम छ? ठिक छ, २०१ research अनुसन्धानका अनुसार यो जटिल छ।
के हात सेनिटाइजरले फ्लू भाइरसलाई मार्दछ?
जब फ्लू भाइरस ओसिलो श्लेष्ममा फसेको हुन्छ, यो हात सेनिटाइजरको संपर्कमा चार मिनेट सम्म संक्रामक रहन सक्छ - अर्को शब्दमा, तपाईले अनुमान गरेभन्दा धेरै लामो। यो के हो भर्खरको अध्ययन भेटिएको भिजेको बलगम बूँदाहरू डबिंग गर्दा फेला पर्‍यो इन्फ्लूएन्जा ए भाइरस बहादुर स्वयंसेवकहरु को औंलाहरु मा।
मांसपेशी relaxers को सूची हो कि तपाइँ उच्च पाउनुहुन्छ
जब फ्लू भाइरसलाई सालिन समाधानमा निलम्बित गरिएको थियो, जब कीटाणुरहितले भाइरसलाई seconds० सेकेन्डमा मार्यो। जब सुक्खा फ्लू कीटाणुहरूमा लागू हुन्छ, हात सेनिटाइजरले भाइरसलाई केवल आठ सेकेन्डमै मार्यो।
अन्वेषकहरू, बाट क्योटो प्रिफेक्चुरल मेडिसिन विश्वविद्यालय , कारण कि बाक्लो, गुपी म्यूकस भाइरसको वरिपरि ढालको रूपमा काम गर्दछ, हात सेनिटाइजरलाई यसलाई पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दछ। सालिन - नासमझ वा बाक्लो होईन - सेनिटाइजरको भाइरसमा छिर्ने र यसको काम गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्दैन। सुक्खा बलगम को लागी Ditto। यसैले भाइरस निर्मूल गर्ने समय यति धेरै फरक हुन्छ।
फ्लू भाइरसको प्रभावमा पर्ने सबैको हातमा भाइरस अन्त्य हुने तरीका छनौट गर्ने लक्जरी हुँदैन m बलगम, खारा वा सुकाएर। त्यसोभए यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हात सेनिटाइजरले ठीकसँग काम गर्न कति समय लिन्छ। अन्यथा, तपाई आफैंमा संक्रमित हुने वा अरुलाई भाइरस फैलाउने जोखिम लिन सक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित : कसरी फ्लू रोक्न
के हात धुनेले फ्लूलाई मार्छ?
अध्ययनका अनुसार हात धुनु - साबुन बिना नै र संक्रमित बलगम गीला भएको बेला पनि फ्लू भाइरस हटाउन एकदम प्रभावकारी थियो। यसले केवल seconds० सेकेन्डमा यसलाई मेटायो। समस्या मात्र यो छ कि प्राय: जसो मान्छेहरूले उनीहरूको हातहरू लगभग लामो समयसम्म धुँदैनन्, र धेरै अवस्थाहरूमा साबुन र पानी मात्र उपलब्ध हुँदैनन्। ती अवस्थाहरूमा, हात सेनिटाइटर बेकार छ?
सम्बन्धित: हात धुने १०१
यो सबै उचित हात स्वच्छताको बारेमा हो
तपाईले छनौट गरेको विधि फरक पर्दैन - सेनिटाइजर वा साबुन र पानी - कुञ्जी कति राम्रो छ र कति लामो तपाईं सफा गर्नुहुन्छ। सबैजना नयाँ खोजमा सहमत छैनन्, विशेष गरी किनभने अनुसन्धानकर्ताहरूले हात छालामा काम गर्दा कसरी छालामा घुलमिल हुन्छन् भनेर अध्ययन गरेन, मात्र यो औंलाहरूमा ड्याब हुँदा मात्र।
लडाई उचित थिएन, कार्ल फिचनबम, एमडी भन्छन्, आन्तरिक औषधि विभागमा चिकित्सा प्राध्यापक, संक्रामक रोगहरूको विभाजन। सिन्सिनाटी कलेज विश्वविद्यालय मेडिसिन । ह्यान्ड सेनिटाइजर्स जहिले पनि रबिंग मोभनको साथ प्रयोग गरिन्छ — तपाईंले यसलाई आफ्नो हातमा खसाल्नु पर्छ वाष्पीकरण र विघटन गर्नका लागि। त्यो वास्तविक प्रयोग हो जुन गर्न आवश्यक छ। ह्यान्ड रब्ब यस सबैको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
माइकल चांग, ​​एम.डी., एक संक्रामक रोग बाल रोग विशेषज्ञ र मा बाल रोग विशेषज्ञ का एक सहायक प्रोफेसर ह्युस्टनको UTHealth मा McGovern मेडिकल स्कूल , सहमत। डा। चांग भन्छन् कि सम्भावना तपाईले आफ्नो हातमा हात सेनिटाइटर राख्नुहुनेछ र त्यसलाई त्यहाँ बस्न दिनुहोस्। कसैले पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर त्यसरी प्रयोग गर्दैन।
दुबै Drs। फिचनबउम र चांगले टिप्पणी गरे कि यो हात सेनिटाइजरको रासायनिक कार्य भन्दा बढी हो जसले यसलाई प्रभावकारी बनाउँदछ - यो हात एकसाथ रसिbing्ने मेकानिकल कार्य पनि हो। मलाई लाग्छ यदि अनुसन्धानकर्ताहरूले हातले हाते औंलाहरूमा हाते सेनिटाइजर घस्रेको भए यो भाइरसलाई मार्ने क्रममा हात धुने जत्तिकै प्रभावकारी हुनसक्थ्यो, डा। फिचनबमले भने।
अनुसन्धानकर्ताहरूले उनीहरूको अध्ययनको सीमिततालाई स्वीकारे र हाते रब्बलाई समावेश गर्न आफ्नो अनुसन्धान विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्।
हामी हातले माथितिको कार्यको वैज्ञानिक महत्त्व प्रमाणित गर्दैछौं जसले उत्तम हातले मलाथरण विधि प्रस्ताव गर्ने हो भने,Ryohei हिरोस, अध्ययन को अग्रणी लेखक।कन्फेक्शनमा भएको वृद्धिको कारण संक्रामक बलगममा इथानोल एकाग्रताको दरमा वृद्धिले हाते रब्बले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कसरी मूत्र पथ संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
कहिले (र कसरी) उत्तम रूपमा हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने
विज्ञहरू भन्छन कि फ्लूबाट उत्तम सुरक्षा फ्लू शट हो, त्यसपछि उचित हात स्वच्छता अभ्यास। अर्थ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं एक प्रभावकारी क्लीन्जर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं एक हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC) सिफारिस गर्दछ यी do र do donts को।
गर्नुहोस् कम्तिमा %०% इथेनॉल रक्सीको साथ ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्।
गर्नुहोस् सेनिटाइजर तपाईंको हातको हत्केलामा लागू गर्नुहोस् (सही रकमको लागि उत्पादनको दिशा निर्देशनहरू पढ्नुहोस् - सामान्यतया स्क्वर्ट वा दुई) र दुवै हातको सतहमा रग्राउनुहोस् जबसम्म सेनिटाइजर सुख्खा हुँदैन (लगभग २०--30० सेकेन्ड)।
गर्नुहोस् औंलाहरूको खाली ठाउँ र न nailsहरू मुनि सम्म स्यानिटाइजर रग गर्नुहोस्।
नगर्नुहोस् एक हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् यदि हात देखिने फोहोर वा चिल्लो हो, दुई चीजहरू जुन सेनिटाइजरलाई कीटाणुहरू भित्र छिर्न गाह्रो बनाउँदछ।
यदि तपाईं साबुन र पानी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, सीडीसीले यी चरणहरूको सिफारिश गर्दछ:
तपाईंको हातहरू सफा बगिरहेको पानीले न्यानो पार्नुहोस् वा चिसो
साबुन लागू गर्नुहोस्। यो जीवाणुरोधी हुनु हुँदैन।
कम्तिमा २० सेकेन्डको लागि आफ्ना हथेलीहरू, हातको पछाडि कलाई सम्म, औंलाहरू बीच र न nailsहरूमुनि स्क्रब गर्नुहोस्। त्यो समयको बारे मा दुई पटक मुबारक जन्मदिन गीत गुन गर्न लिन्छ।
आफ्ना हातहरू राम्ररी कुल्नुहोस्।
सफा तौलिया, वा हावा सुख्खा संग ड्राई।
तपाईं कुन विधि रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा फरक पर्दैन, यदि तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुभयो भने, तपाईं सम्भाव्यता एकबाट बच्न सक्नुहुन्छ चिसो, फ्लू, वा COVID-19 ।
स्टेटिनका side सम्भावित साइड इफेक्टहरू (र कसरी उनीहरूलाई लड्ने)
डेजी Lewellyn मृत्यु को कारण: उनी कसरी मरे?
आतंक हमला र चिन्ता हमला को बीच फरक
के हुन्छ यदि हेमटोक्रिट उच्च छ?
वयस्कों को लागी सामान्य रक्त ग्लुकोज स्तर के हो
कोलास मा सक्रिय संघटक के हो
के म claritin र claritindसँगै लिन सक्छु?
म कति तरल ibuprofen लिन सक्छु